आज ऐतिहासिक कम्युनिस्ट एकता : एकताले कस्तो प्रभाव पार्छ ? - Naya Patrika
आज ऐतिहासिक कम्युनिस्ट एकता : एकताले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
शुरोजंग पाण्डे, वीरेन्द्र ओली/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३ जेठ | जेठ ०३, २०७५
एकीकृत पार्टीको प्रस्तावित सांठनिक संरचना
अनुपात : ५५/४५ (एमाले/माओवादी)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय हुने टुंगो लागेको छ । सांगठनिक र विधानसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले टुंगो लगाउँदै केन्द्रीय कमिटीको संख्या यकिन गरेका हुन् । सहमतिअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा एमालेको ५४.६४ प्रतिशत र माओवादीको ४५.३५ प्रतिशत हिस्सेदारी रहनेछ ।
केन्द्रभन्दा तल्ला तहका सबै कमिटीमा पनि मोटामोटी यही अनुपातमा समायोजन गर्ने सहमति भएको उच्च स्रोतले जनायो । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिशत अनुपातमा संरचना नबन्ने बताए । ‘दुवै पार्टी एक भइसकेपछि कसको कति भन्ने नै हुँदैन, सबै एउटै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुने हो,’ उनले भने ।
एमाले– २५, माओवादी– १८
पोलिटब्यूरो : १४५ सदस्यीय
एकीकृत पार्टीको स्थायी समिति ४३ सदस्यीय बनाउने टुंगो लागेको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । उनका अनुसार एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १८ सदस्य रहन्छन् । पोलिटब्युरो भने केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ अर्थात् बढीमा १४५ सदस्यीय रहने गरी गठन गर्ने समझदारी भएको छ ।
सबैभन्दा माथि स्थायी समिति हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी, महानगर/उपमहानगर/नगर कमिटी, गाउँपालिका कमिटी, वडा कमिटी र प्रारम्भिक कमिटीसहित १० वटा तहगत संरचनाको कमिटी बन्ने समझदारी भएको छ ।
सांगठनिक कार्यदलमा केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीहरू कार्यकारी हुने समझदारी भएको छ । केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा र प्रारम्भिक कमिटी रहने तथा केन्द्रीय कमिटीभित्र स्थायी समिति र पोलिटब्युरो अंगका रूपमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थायी समितिमा ओलीको ब्रिफिङ
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्मा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व दुई पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा हुन लागेको बताए । सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टी स्थायी समितिलाई ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएका सहमति ब्रिफिङ गरेका हुन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग दुवै अध्यक्षले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिएका थिए ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ऐतिहासिक निर्णय : प्रचण्ड
पार्टीका हेडक्वार्टर सदस्यहरूको बैठकमा पार्टी एकताको निर्णय सुनाउँदै प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक ऐतिहासिक निर्णय भएको बताए । बुधबार दिउँसो ४ बजेदेखि झन्डै ५ घन्टा प्रचण्डनिवास खुमलटारमा बसेको बैठकले पार्टी एकताको विषय अनुमोदन गरेको छ । ‘चुनाव चिह्न सूर्य राख्ने, प्रस्तावनामा जनयुद्ध लेख्ने र सांगठनिक रूपमा कुन पार्टीको कति हुने भन्ने विषयमा सहमति भयो,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता गणेश शाहले भने, ‘भोलि विधिवत् रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन हुन्छन् । यो अवस्थामा न एमाले रहन्छ न माओवादी, न त जबज र २१औँ शताब्दीको जनवाद नै रहन्छ । समाजवादउन्मुख हुने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त हुनेछ ।’
यसरी पुगियो एकतासम्म : जनार्दन शर्मा
१७ असोज ०७४ मै पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने सहमति भएको हो । त्यसयता धेरै छलफल भए । कार्यदलले पेस गरेका विषयमा एमाले र माओवादी अध्यक्षले गम्भीर अध्ययन गर्नुभयो । प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै विमतिमा नेताहरू अन्तरकुन्तर छलफल गर्दै एकता गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । विकास, समृद्धिका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुनेछ । बिहीबार दुवै पार्टीले एकता अनुमोदन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुन्छ र आयोगमै दर्ता हुन्छ ।
दुई पार्टीको सहमतिमा नयाँ केन्द्रीय कार्यालय
बिहीबार नयाँ पार्टी गठन हुने भए पनि एकीकृत पार्टीको कार्यालय अझै अनिर्णीत छ । तर, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले दुवै पार्टीबीचको सहमति तथा पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकबाट नयाँ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पनि टुंगो लाग्ने बताए ।
एकताले कस्तो प्रभाव पर्छ ?
एकताका चार प्रभाव
पहिलो : एसियाकै तेस्रो कम्युनिस्ट पार्टी
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नेपालका लागि मात्र होइन, एसियाका लागि समेत सामान्य घटना होइन । दुई पार्टी एकीकरणपछि चीन र भियतनामपछि एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्नेछ । दक्षिण एसियाको भने पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी हुनेछ । राजनीतिक हिसाबले दूरगामी असर पर्नेछ ।
दोस्रो : राजनीतिक स्थायित्व
एकताले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको युग व्यवहारमै स्थापित गर्नेछ । सरकार बीचमै ढल्ने कुनै सम्भावना हुनेछैन । यसले देशमा विकास र समृद्धिको मनोविज्ञान बनाउनेछ र मुलुक त्यसतर्फ अग्रसर हुनेछ । राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरता समाप्त भएको सन्देश प्रवाह हुनेछ ।
तेस्रो : लामो समय कांग्रेस सत्ताबाहिर
राजनीतिक ध्रुवीकरण निर्णायक बनेर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो शक्तिका रूपमा उदय हुनेछ । कांग्रेस लामो समयसम्म शासनसत्ताबाट पछि धकेलिन सक्छ । अर्को चुनावमा बहुमत ल्याउँदा फरक कुरा अन्यथा कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।
चौथो : आर्थिक विकास र सिन्डिकेट अन्त्य
राजनीतिक स्थायित्व हुनेबित्तिकै आर्थिक विकास अघि बढ्छ । यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्य सुरु भएकाले सबै क्षेत्रमा अन्त्य हुने र चौतर्फी विकासको सम्भावना हुनेछ । सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समाजवाद स्थापनाको सम्भावना देखिन्छ ।
#आज ऐतिहासिक कम्प्युनिस्ट एकता